तपाईंको यो वर्ष कस्तो होला ? यी आठ राशी अति उत्तम | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more तपाईंको यो वर्ष कस्तो होला ? यी आठ राशी अति उत्तम
तपाईंको यो वर्ष कस्तो होला ? यी आठ राशी अति उत्तम
बैशाख १ गते, २०७६ - १४:४८
काठमाडौं । यस्तो छ २०७६ सालको वार्षिक राशिफल:-
यो राशीलाई यस वर्ष ग्रहको प्रभाव समष्टिमा राम्रो रहने देखिन्छ । वर्षारम्भमा तृतीय राहु, नवम गुरु शनि वक्र रहेपनि तृतीय भावमा पूर्ण दृष्टि रहने र चन्द्र सूर्य को अनुकूलताले भाग्य बलियो हुनुको साथै वौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ ।
सन्तान प्राप्तीको योग पनि यस वर्ष रहनेछ । राहुको कारण दाजुभाइ र सहयोगीहरूको सहयोग खासै मिल्ने देखिन्न । साधक व्यक्तिहरूको लागि यो वर्ष अनुकूल रहनेछ । धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्नुको साथै सामाजिक कार्यमा सम्मान पाउने योग छ । नोकरीमा उतार चढावका बाबजूद सफलतामा पुग्न सकिनेछ । राजनीतिमा आफ्ने वर्चश्व कायम राख्न सफल भइनेछ । मित्रहरूले पूर्ण सहयोग गर्नेछन परिवारको सहयोग सोचे जस्तै मिल्नेछ । घर जग्गा जोड्ने र सवारीसाधन जोड्ने तरखरमा हुनुहुन्छ भने सजिलै सफलता मिल्नेछ । शैक्षिक उन्नतिमा छात्रवृत्ति हासिल गर्दै विदेश यात्रा हुने र राजनैतिक र कूटनैतिक कार्यको शिलशिलामा अथवा वैदेशिक व्यापारको बजार व्यवस्थापनको लागि विदेशिने योग छ ।
नयाँ प्रेम हुनुको वा पुरानो प्रेमको यात्राले वैवाहिक मार्ग अवलम्बन गर्नेछ । ज्येष्ठ ९ गतेदेखि कार्तिक १२ गतेसम्म गुरु पुनः वृश्चिक राशिमा फर्कने हुँदा स्वास्थ्यमा बाधा आउनुको साथै काममा अवरोध आउने, मन अशान्त हुने, भाग्य कमजोर हुने योग छ । धार्मिक कार्यमा अरुचि बढ्ने, लेनदेनमा अग्रसर भएमा आर्थिक संकट बढ्ने अवस्था आउँछ । विश्वास गरेकाले धोका दिनेछन् । मन अशान्ति हुनेछ । यो समय ओं बृँ बृहस्पतये नमः भन्ने मन्त्र जप गर्नु राम्रो हुन्छ । अन्य समयमा ग्रहगोचर राम्रो रहनेछ । आषाढ, आश्विन, माघ, फाल्गुन राम्रो महिनामा पर्दछ भने ज्येष्ठ, श्रावण, मार्ग, चैत्र खराब र अन्य महिना मध्यम रहनेछ ।
यो वर्ष ग्रहगोचर का दृष्टिमा त्यति अनुकूल देखिन्न । वर्षारम्भमा अष्टम वक्र शनि र गुरुको प्रतिकूल प्रभाव र द्वितीय वक्र राहु शनि गुरुको वक्र दृष्टि रहने हुँदा धन क्षति हुनुको साथै दाँत मुखमा पीडा हुनेछ । अनावश्यक विवादले मानिसक तनाव बढाउनेछ । विश्वासमा धोका हुनेछ ।
ठूला व्यक्तिसँग हुने विमतिले राजनीति कर्मीहरूको अवस्था जटिल बन्नेछ । हाड जोर्नी दुख्नुको साथै मुत्रविकार बढ्ने सम्भावना रहन्छ । शरीरमा आलस्यता बढ्नुको साथै निर्णयको अभावले काम बीचमा रोकिने र आर्थिक संकट प्रशस्त मात्रामा बढ्नेछ । घरेलु समस्याले पनि धेरै सताउनेछ । मित्रहरूले अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्ने छैनन् । सवारी साधनले बेला बेलामा धोका दिनेछ ।
पतीपत्नीबीच मतभेद बढ्ने, व्यापारमा समस्या आउने र कूटनैतिक तथा वैदेशिक कार्यमा संकट आउने योग छ । नोकरीमा संकट आउनेछ । राजनीतिमा एक पछि अर्को समस्याले पदप्रतिष्ठामा समेत आँच आउनेछ । ज्येष्ठ ९ देखि कार्तिक १२ गतेसम्म गुरुको अनुकूल प्रभावले बोल्न विचार पुर्‍याउँदा वैदेशिक कार्यमा सुधार आउनुको साथै व्यापारमा प्रगति हुने, पति –पत्नीबीच सम्बन्ध राम्रो बन्ने, परिवारिक सहयोग मिल्ने तथा शैक्षिक यात्राको अवसर मिल्ने, सन्तानबाट लाभ हुने, प्रेममा सफल हुने र वैवाहिक कार्यमा सकारात्मक कुरा अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।
फाल्गुन ५ गतेदेखि शनि अनुकूल रहने छ । मित्रहरूले साथ दिने हुँदा नयाँ कामको शुरूआत हुने तथा रोकिएका कामहरु पनि पूरा हुनेछन् । आम्दानी पनि बढ्नेछ । परिवारिक सुख र नोकरी तथा राजनीतिमा सुधार आउनेछ । वैशाख, आषाढ, भाद्र, पौष महिना प्रतिकूल रहने छ । श्रावण, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र अनुकूल रहने र अरू मध्यम रहनेछन् । वर्षको आरम्भ देखिनै ओं नमः शिवाय महाँ देवाय मृत्युँञ्जय महाँ देवायनमोऽस्तुते भन्ने मन्त्रको जप सकेसम्म धेरै गर्नु राम्रो हुनेछ ।
यो वर्ष ग्रहगोचर मध्यम रहनेछ । वर्षारम्भको समय गुरु, शनि, सूर्य, चन्द्र र राहु अनुकूल रहने हुँदा गरेका काममा सफलता मिल्ने छ । व्यापार उन्नति, शैक्षिक उन्नतिका साथै कूटनैतिक कार्यलाइ लिएर विदेश यात्रा हुने योग छ । राजनीतिमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त भई अरूलाई उछिन्दै अघि बढ्ने अवसर पनि मिल्नेछ ।
राशीमा एकादश तृतीय स्थानमा गुरुको दृष्टि पर्ने हुँदा आम्दानी प्रशस्त मात्रामा हुने, पढाइमा प्रगति हुने, तथा सन्तान प्राप्ति र भएका सन्तानले उन्नति गर्ने योग बलियो छ । किशोर किशोरीहरूले प्रेम गर्ने अवसर मिल्नेछ । साथै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने सम्भावना रहन्छ । औद्योगिक कार्यमा लाग्नेहरूको लागि समय अनुकूल रहनेछ । निर्माण व्यवसायीहरूले सोचेजस्तै सफलता पाउनेछन् ।
ज्येष्ठ ९ गतेदेखि कार्तिक १२ गतेसम्म गुरु प्रतिकूल हुनाले शत्रु बढ्ने, काममा अवरोध आउने, वैदेशिक कार्यमा समस्या हुने र नोकरीमा संकट आउनुको साथै राजनीतिमा ठूलो संकट अउनेछ । विश्वास गरेकाले धोका दिनेछन् । व्यापारमा संकट आउने, कूटनैतिक कार्यमा असफल भई राजनीतिमा मुद्दा मामिलाले बदनाम हुनसक्ने यो समय अति संयम हुनुपर्नेछ । कार्तिक १३ देखि फाल्गुन ४ सम्म ग्रह गोचर राम्रो भएकोले महत्वपूर्ण कामहरू त्यति बेलानै गर्नु राम्रो हुनेछ । फाल्गुन ५ देखि अढैया शनि शुरू हुने हुँदा समय प्रतिकूल हुनेछ । आर्थिक कठिनाई धेरै बढ्नेछ । स्वास्थ्यमा बाधा आउनेछ ।
मुटु तथा मष्तिष्कमा समस्या आउन सक्छ । पति–पत्नी बीच सम्बन्ध बिग्रन सक्छ । ज्येष्ठ, श्रावण, आश्विन, माघ अशुभ महिना हुन भने वैशाख, भाद्र, कार्तिक, पौष, फाल्गुन शुभ महिना हुन् । अरू मध्यम रहने छन् । ओं शं शनिश्चराय नमः यो मन्त्रको जप वर्षारम्भ देखिनै गर्नुहोला ।
ग्रह गोचर समष्टिमा राम्रो छ । वर्षारम्भदेखि नै राहु बाह्रौं तथा छैटा गुरुको प्रतिकूलताले खर्च बढाउने, विवाद बढाउने र चिन्ता बढाउने हुनाले संयम हुनुपर्नेछ । विद्या र उन्नतिमा बाधा हुने र वौद्घिक कार्यमा प्रशस्त कठिनाई आउनेछन् । समयमा निर्णय नहुँदा महत्वपूर्ण कामहरु बिग्रनेछन् । मित्रहरूले समयमा कुरा नबुझ्ने र शत्रुले मौका छोपेर अप्ठ्यारो पारी फसाउने हुँदा गोपनियतामा जोड दिनुपर्ला ।
प्रेम सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न हुँदा प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने र त्यही कारणले प्रसस्त धन क्षति हुनसक्ने भएकोले प्रेमको मामलामा सचेत हुनु राम्रो देखिन्छ । वैदेशिक व्यापारमा समस्या आउने तथा कूटनैतिक क्षेत्रमा विवाद बढ्न सक्ने हुनाले यस्ता कार्यहरूमा संयमित भएर काम गर्नु उचित हुनेछ । धार्मिक पक्ष कमजोर हुँदा मनोबल कमजोर भएपनि ज्येष्ठ ९ गतेबाट कार्तिक १२ गतेसम्म पञ्चम गुरुको भाग्य स्थान, एकादश स्थान र राशीमा दृष्टि अनुकूलताले बौद्धिक कार्यहरू धेरै हुनेछन् । शैक्षिक कार्यमा सफलता सोचे जस्तै मिल्नेछ ।
लेखन मार्गमा सोचेभन्दा बढि सफलता मिल्नेछ । सन्तान सुख राम्रो हुनुको साथै सन्तान नहुनेलाई सन्तान लाभ हुने वर्ष छ । व्यापारमा सफलता मिल्नुको साथै वैदेशिक कार्यमा निर्विवाद अघि बढ्ने अवसर मिल्नेछ । सो कार्यबाट मनग्य धन कमाउने अवसर मिल्नेछ । कूटनैतिक क्षत्रमा ऐतिहासिक सफलता मिल्नेछ । कूटनैतिक कार्यबाट राजनीतिमा अग्रहुने अवसर पनि मिल्नेछ ।
मित्र परिवारजनहरुको पर्याप्त सहयोग मिल्नेछ भने शत्रु पराजय हुनेछन । घर तथा सवारी साधन जोड्ने तरखरमा हुनुहुन्छ भने समयले साथ दिनेछ । आषाढ, भाद्र, कार्तिक तथा फाल्गुन महिना अशुभ हुनेछन भने बैशाख, ज्येष्ठ, आश्विन, पौष शुभ महिना हुन । अन्य महिनाहरु मध्यम रहनेछन ॐ नमः भगवते वाशुदेवाय यो मन्त्रको जप बर्षारम्भ देखिनै गर्नु राम्रो होला ।
यस वर्षका ग्रह गोचर समष्टिमा राम्रो रहनेछ । एकादश स्थानमा उच्च राहुलाई पञ्चम गुरुको दृष्टिको अनुकूल प्रभाव वर्षभरि नै रहनेछ । राहुको तथा गुरुको अनुकूलताले अधुरा कामहरु पुरा हुने र नयाँ काम आरम्भ हुने हुँदा आम्दानी ह्वात्तै बढ्ने मित्र तथा गैर मित्रहरूबाट पर्याप्त सहयोग पाउने हुँदा उच्च सम्मान बढ्ने मस्तिष्क तीव्र हुने र शत्रुलाई परास्त गर्ने योग भएकोले सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ला ।
गुरु, केतु तथा शनि पञ्चममा एक साथ रहेको वर्षारम्भले शैक्षिक क्षेत्रलाइ धुँमिल्याउन खोजे पनि शनि बृहस्पतिको संयोग निकै बलवान् हुने हुँदा उतारचढावका वावजुद शैक्षिक मार्ग सबै र विशेष कानून र प्राविधिक पक्षमा अनुकूल हुनुको साथै छात्रवृत्तिसहितको शैक्षिक यात्रा गर्ने अवसरहरू पनि मिल्नेछन् । अरूको विश्वास सजिलै जित्न सकिनेछ । बोलिको प्रभाव राम्रो रहनेछ । ठूला व्यक्तिले आफूप्रति विश्वास गर्नेछन् ।
पराक्रममा वृद्धि हुनुको साथै अधुरा काम पूरा हुने तथा नयाँ काम पाउने बलियो सम्भावना छ दोहोरो । सहयोगीहरूबाट र दाजुभाइहरूबाट राम्रो सहयोग नपाए तापनि आफ्नै प्रयास र प्रयत्नले सफलता हाँसिल गरी महत्वपूर्ण काम हात पार्न सफल हुनुहोला । औद्योगिक कार्यमा नयाँ अवसरहरू पनि पर्याप्त मात्रामा मिल्नेछन् ।
घर तथा सवारी साधन जोड्ने अवसर पनि मिल्नेछ । सप्तम शनि र पञ्चम गुरुको एक साथ बन्ने राजयोगले बौद्धिक र कूटनैतिक कार्यमा ठूलो फड्को मार्दै राष्ट्रिय सम्मान पाउने योग छ । भुलेका मित्रले याद गर्दै विदेश घुमाउने प्रयास गर्नेछन् । प्रेमको प्रस्ताव अरूबाटै आउनेछ । पुराना प्रेमले दाम्पत्य जीवनको बाटो अंँगाल्नेछ । सामाजिक कार्यमा ऐतिहासिक सफलता मिल्नेछ । नोकरीमा पदोन्नति र राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व बढाउन प्रतिस्पर्धाले मात्र सकिनेछ।
ज्येष्ठ गतेदेखि कार्तिक १२ गतेसम्म गुरु केन्द्रादि दोष बनाउँदै प्रतिकूल हुने हुँदा घरेलु कार्यमा र मित्रको सम्बन्धमा अनावश्यक संकट ह्वात्तै बढ्नेछ । फाल्गुन ५ गते पछि शनिको सातौं स्थान प्रवेशले पति–पत्नीबीच बढ्ने विवादले मनलाई विचलित पार्ने तथा आफन्तहरूसँग मनमुटावले शत्रुलाई बलियो गराउने भएकोले केही अप्ठ्याराहरू देखिए पनि यस वर्ष ग्रह स्थिति राम्रो छ । ज्येष्ठ, आषाढ, कार्तिक, माघ राम्रो महिनामा पर्दछ भने श्रावण, आश्विन मार्ग र चैत्र खराब महिना र वैशाख, भाद्र, पौष फाल्गुन मध्यम महिना रहनेछ ।
वार्षारम्भमा चतुर्थ वक्री केतु गुरु र अढैया शनिको प्रतिकूल प्रभाव रहनेछ । गुरु तथा शनिका कारण परिवारिक समस्या बढ्नेछ । पेट गडवड हुनुको साथै मित्रहरूको असहयोगले काम गर्न अप्ठ्यारो हुनेछ । विश्वास गरेकाहरूबाट विश्वास घात हुनेछ । बसाईं सराइको योग पनि देखिन्छ । सवारी साधनले पटकपटक दुःख दिनेछ । घरेलु समस्याले गर्दा पढाइमा अवरोध आउनेछ । सन्तानसँग पनि विमति भएर चिन्ता बढ्नेछ ।
शत्रुले परिवारसँग मिलेर फसाउने प्रयत्न गर्नेछन् । आफन्तहरू सहयोग गर्न भन्दा कुरा काट्न उद्धत हुनेछन् । आमा हुनेहरूको लागि आमाको स्वास्थ्य समस्याले धेरै सताउनेछ । हाडजोर्नीको पीडा पनि कमी हुनेछैन । लेनदेनमा विवादको समाना गर्नुपर्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा राहुको प्रतिकूलताले समय समयमा संकट सिर्जना गरेपनि राहु उच्च हुनाले प्रयत्न गर्दा सफल हुन सकिनेछ । ज्येष्ठ ९ गतेदेखि कार्तिक १२ गतेसम्म गुरुको अनुकूलताले गर्दा भाग्य बलियो भई अरूको विश्वास सजिलै जित्न सकिनेछ । संयमित भएर काम गर्दा धेरै कुरामा सफलता मिल्नेछ । पराक्रम बढ्ने अधुरा काम बन्ने तथा नयाँ काम पाउने योग छ । यो समय सेवक तथा दाजुभाइहरूबाट उचित सहयोग मिल्न सक्नेछ ।
धर्ममा रुचि बढ्ने र तीर्थयात्राको योग पनि बलियो छ । सामाजिक कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परे पनि अन्ततः तपाईंको आवश्यकता महसूस हुनेछ र विरोधीहरू नै शरण पर्न आउनेछन् । व्यापारमा लाभ सोचेभन्दा बढि नै मिल्नेछ । कूटनैतिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक र अविष्मरणीय कार्य गरेर समाजको उत्थान र शत्रुको शीर निहुराउन सफल हुनुहोला । विना दौडधूप प्रेममा सफलता मिल्नेछ ।
अविवाहितहरूको लागि विवाहको र विवाहितहरुको लागि सन्तानको योग रहनेछ । खर्चको गति तीव्र भए पनि आम्दानीका श्रोतहरू चौतर्फी जुट्नेछन् । राज्यले फसाउने प्रयास गरेपनि तपाईंको इमान्दारिताले अन्ततः राज्यनै झुक्नुपर्ने देखिन्छ । यो समय बलको काममा भन्दा बुद्धिको काममा जोड दिनु राम्रो हुनेछ । फाल्गुन ५ गते देखि अढैया शनि सकिने हुँदा वैदेशिक व्यवसाय र कुटनैतिक क्षेत्र र पर्यटकीय व्यवसायमा हुनेहरूको लागी यो समय राम्रो रहनेछ । सवारी साधन र घरजग्गा व्यवसाय गर्नेहरु फाल्गुन ४ गते सम्म नराम्रोसँग फस्न सक्नेछन् । आषाढ, श्रावण, मार्ग, फाल्गुन राम्रो महिनामा पर्दछ भने बैशाख, भाद्र, कार्तिक, पौष नराम्रो र ज्येष्ठ, आश्विन, माघ, चैत्र मध्यम महिनामा पर्छ ।
वर्षका ग्रह गोचर आगामी फाल्गुन ४ गते सम्म राम्रो छ । सानातिना उल्झन आए पनि वर्षारम्भमा तृतीयस स्वगृही गुरु तथा चतुर्थेश पञ्चमेश शनि तृतीय भावमा बलशाली भएकोले आँट र साहस प्रशस्त मात्रामा बढ्नेछ । नयाँनयाँ सोचका साथै नयाँनयाँ काममा प्रवेश गरी सफलतामा पुग्न सकिनेछ । मित्र तथा परिवारजनको उचित सहयोग मिल्नेछ ।
भुलेका मित्रले पुनः याद गर्नेछन् । घर तथा सवारी जोड्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने सजिलै सफलता पाउनुहोला । शैक्षिक यात्रामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने, ज्ञान विज्ञानमा विषेश लाभ हाँसिल गर्ने र प्रविधीक तथा कानूनी शिक्षामा ऐतिहासिक सफलता मिल्ने योग रहेको छ । सामान्य मित्रको सम्बन्ध प्रेममा परिणत हुनेछ भने घनिष्ट प्रेम वैवाहिक मार्गमा अघि बढ्न सक्नेछ । सन्तान प्राप्तीको पनि बलियो सम्भावना छ ।
बोलिको प्रभाव राम्रो रहेकोले कूटनैतिक कार्यमा कीर्तिमानी कार्य गर्न सफल भई अरुको शीर निहुराउन सफल हुनुहोला । ठूला व्यक्ति सँग निकट भई काम गर्ने अवसर मिल्नेछ । राज्यका उच्च अङ्गले तपाईंको परामर्स लिनेछन् ज्येष्ठ, आश्विन, मार्ग र माघ महिना बाहेकका महिनामा धन आर्जन प्रशस्त मात्रामा हुनेछ । धार्मिक, सामाजिक वा वैज्ञानिक कार्यको अनुसन्धानको सिलसिलामा यात्रा गर्ने अवसर मिल्नेछ । व्यापारमा सफलता पाउन अलि प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेछ । भाग्यले साथ नदिए पनि कर्म बलियो भएकोले बर्षारम्भदेखि फाल्गुन ४ सम्म समय अनुकूल रहनेछ ।
फाल्गुन ५ देखि अढैया शनि तथा तृतीय केतु र नवौं राहुको प्रतिकूलताले पेट, छाती समस्या हुने तथा नोकरीमा र राजनीतिमा संकट आउनाले मनमा चिन्ता बढ्नेछ । यतिबेला शत्रु सक्रिय हुने हुनाले सजग रहनु उचित हुनेछ । शरीरमा चोटपटक लाग्न सक्छ । निर्णय गर्न गाह्रो भई आफू दुविधाग्रस्त भएको मौकामा अरुले गलत फाइदा उठाउन सक्ने भएकोले धैर्य गर्नुपर्ला । मातापिताको स्वास्थ्यमा वाधा र सम्बन्धमा ह्रास आउन सक्ने भएकोले सचेत हुनु वेश रहनेछ । ज्येष्ठ, आश्विन, माघ, मार्ग खराव महिना, श्रावण, भाद्र, पौष, चैत्र राम्रो र आषाढ, कार्तिक, फल्गुन र बैशाख मध्यम महिना रहनेछन ।
वर्षको ग्रह गोचर मध्यम रहनेछ । वर्षारम्भबाट आषाढ ९ सम्म र कार्तिक १३ देखि द्वितीय गुरुको दशम दृष्टि समेतको अनुकूताले बोलिको प्रभाव राम्रे रहने हुँदा नोकरीमा आफ्नो वर्चस्व बढाउन सकिनेछ । अरुको विस्वास जितेर राजनीतिमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरी धन मनग्य कमाउन सकिने छ ।
वैदेशिक व्यापार र कूटनैतिक क्षेत्रमा कुशलता प्रदर्शन गरी उचित लाभ उठाउन सकिनेछ । पढाइमा र वौद्धिक कार्यमा राम्रै सफलता मिल्नेछ । लेखन मार्गमा रुचि बढ्ने र सफल पनि हुने देखिन्छ । ज्येष्ठ ९ देखि कार्तिक १२ गते द्वितीय शनि, केन्द्रादि दोष युक्त गुरु, अष्टम राहु, द्वितीय केतु रहेका छन् जस्ले कार्यमा निरासका बादलहरू चौतर्फी फैलाउने छन् ।
सोचने शक्ति अत्यन्त कमजोर हुनेछ । जसको फलस्वरुप मुटु र मस्तिष्कमा पीडा, मानसिक तनाव र अनावयश्क विवादले सञ्चित धनको नास भई अरुबाट तीव्र आलोचना हुनेछ । विश्वास गरेकाले धोका दिनेछन् । अरुको काम धेरै गर्नु परे तापनि जश पाउने सम्भावना अत्यन्त कम रहनेछ । गलत विचार प्रशस्त मात्रामा बढ्नेछ । समयमा निर्णय नहुँदा आफ्नो काममा अरुले अधिकार जमाउनेछन् । नोकरीमा एकपछि अर्को समस्याले ग्रसित हुनुपर्नेछ । विनाकारण दोषी भई स्थानान्तरण हुनेछ ।
राजनीतिमा पाएको स्थान र मान गुम्ने प्रवल सम्भावना छ । घरेलु समस्याले सताउनेछ । पारिवारिक समस्याले घरै छाड्ने स्थितिसम्म सिर्जना हुन सक्नेछ । सवारी साधनले पनि धोका दिनेछ । मित्रहरूले सहयोगको सट्टा अक्रमण गर्नेछन । फाल्गुन ५ पछि शनि साढेसाती सकिने हुँदा समय अनुकूल भई शत्रु पराजय हुने र व्यापार तथा पढाइमा सुधार आउनाको साथै उपलब्धिमूलक यात्रा गर्नु हुने र प्रेमको यात्रालाई वैवाहिक मार्गमा परिवर्तन गर्ने योग रहनेछ । पति–पत्नीबीच सौहार्दता बढ्ने छ ।
भाग्यले साथ दिनेछ । धर्ममा मन जाने छ । सामाजिक कार्यमा धेरै प्रशंसा हुनेछ । ज्येष्ठ ९ देखि कार्तिक १२ सम्म महत्वपूर्ण काम सकेसम्म अघि नबढाउनु वेश हुनेछ । बैशाख, भाद्र, आश्विन, माघ शुभ र आषाढ, कार्तिक, पौष, फाल्गुन अशुभ तथा ज्येष्ठ, श्रावण, मार्ग र चैत्र महिना मध्यम रहनेछन् ।
वर्षका ग्रह गोचर प्रतिकूल रहनेछ । मध्य साढेसाती सप्तम राहु तथा राशीको केतु र वार्षारम्भमा राशिमा रहेका वक्र गुरु र शनिको प्रतिकूल प्रभाव रहने हुँदा ग्रहको प्रभावले नकारात्मक अवस्था रहनेछ । धनस्थान र पराक्रम स्थानको मालिक शनि राशिमा बसेकोले विवादहरू बढ्नेछन् । सकेसम्म गोपनीयता अपनाउनु राम्रो रहनेछ । आम्दानीका अवसरहरू मिल्ने छैनन् ।
कामको फुर्सद नहुँदा पनि अधुरा काम बाँकी रहने र नयाँ काममा अवसर नपाउने हुँदा चिन्तित हुनु पर्नेछ । सहयोगीहरूको सहयोग पनि मिल्ने छैन । मित्रहरूले पूर्णरुपमा असहयोग गर्नेछन् । परिवारिक असहयोगले धन हातपार्न सकिनेछैन । घर तथा सवारी साधन जोड्ने क्रममा हुनुहुन्छ भने सजिलै प्राप्त हुने छैन । पढाइमा सफलता नमिल्ने र बौद्धिक कार्यमा कमजोर हुने भएकोले त्यसमा सफलता हाँसिल गर्न सकिनेछैन ।
पढ्नका लागि विदेश जाने तयारिमा भए त्यसमा सफता पाउने सम्भावना छैन । शत्रु बलिया हुने हुँदा आफ्नो जीत सुनिश्चित हुने छैन । व्यापारमा सफलता पाउन निकै कसरत गर्नु पर्नेछ । प्रेममा अवरोध आउने र वैवाहिक कार्यमा विलम्व हुने योग छ । सबैतिरबाट निरासाहरूमात्र छाउनेछन् । मन अत्यन्त विचलित हुनेछ । मनमस्तिष्क र शरीर सबै कमजोर बन्नेछन् । मानसिक तनावलाई नियन्त्रणमा लिन गाह्रो पर्नेछ । गलतलाई सही र सहीलाई गलत ठानेर निर्णय हुने हुँदा सर्वत्र आलोचना हुनेछ ।
झुटा आरोपको सामना प्रशस्त मात्रामा गर्नु पर्नेछ । आफन्तहरूनै कुराकाट्न तम्सिनेछन् । परिवारले समेत साथ नदिने हुँदा दिक्क भएर घर छाड्ने मनस्थिति बन्नेछ । बौध्दिक कार्यहरू ओझेलमा पर्नेछन् । पढाइमा ह्रास आउनेछ । व्यापारमा सङ्कट आउनुको साथै यात्रामा र वैदेशिक कार्यमा प्रशस्त सङ्कट सामना गर्नु पर्नेछ । भरोसा गरेकैहरूले अरुसँग मिलेर फसाउने सम्भावना छ । आर्थिक कारोवारमा निकट सम्वन्धहरू तोडिने सम्भावना रहेकोले सकेसम्म नगद कारोवार नगर्नु नै उचित हुनेछ । ज्येष्ठ, आश्विन, कार्तिक, फाल्गुन शुभ, श्रावण, मार्ग, माघ, चैत्र अशुभ र बैशाख, आषाढ, भाद्र, पौष मध्य महिना हुनेछन् ।
यो वर्ष ज्येष्ठ ८ सम्म बाह्रौ वक्री गुरु शनि रहने हुँदा अनावश्यक विवाद र अनावश्यक खर्चलाई धान्नै मुस्किल पर्नेछ । व्यवासायिक मार्ग अत्यन्तै प्रतिकूल रहनेछ । वैदेशिक कार्यमा अनियन्त्रित ह्रास आउनेछ प्रेमको सम्बन्ध विनाकारण बिग्रन गई मनमा पीडा खपिनसक्नु हुनेछ । पति–पत्नीबीचको सम्वन्ध कमजोर हुनुको साथै परिवारिक आलोचना पनि सामना गर्न मुस्किल पर्नेछ । सानो भूलको परिणाम ठूलो बनेर निस्कनेछ ।
पुराना समस्यालाई कोट्याएर अप्ठ्यारोमा पार्ने काम शत्रुले गर्नेछन् । आर्थिक कठिनाइले प्रतिष्ठामा समेत धक्का पुग्न सक्छ । नोकरीमा विनाकारण दोषी भइ पदमुक्त हुने सम्भावना रहनेछ । राजनीतिमा पुराना कुरालाई उल्टाएर फसाउने काममा शत्रु निकै सक्रिय हुनेछन् । अलिकति मात्र पनि वेहोस गरिएमा झुटा आरोप लगाएर मुद्दा मामलामा फसाउने सम्भावना रहनेछ । विश्वास गरेकाले समेत आवश्यक परेको समयमा धोका दिने भएकोले आफूलाई सम्हाल्न मुस्किल पर्नेछ ।
कार्तिक १३ पछि पनि ग्रह यस्तै प्रतिकूल रहनेछन् । साढेसाती को प्रभाव वर्ष भरिनै रहनेछ । हड्डी र नसा कमजोर भई शरीर सिथिल हुने र मन समेत विचलित हुने हुँदा सक्दो आराम गर्ने प्रयास गर्नुहोला । ज्येष्ठ ९ बाट कार्तिक १२ सम्म गुरुले लाभ भावमा गोचर गर्ने हुँदा व्यापार तथा वैदेशिक कार्यमा अपेक्षित सुधार आउने र अवस्था सकारात्मक हुनेछ । आर्थिक उन्नतिमा अप्रत्यासित प्रगति हुन गई मनस्थितिलाई प्रशस्त उर्जा प्रदान गर्नेछ ।
रोकिएका कामहरू क्रमशः बन्न थाल्नेछन् । नयाँ कामका प्रस्तावहरू पनि आउनेछन् । कमजोर शरीरमा उत्साह पैदा हुनेछ । मित्रहरूले यथार्थ बुझेर आत्मालोचना र क्षायाचनाका गर्दै साथ सहयोगको तत्परता पनि देखाउनेछन् । पढाइमा सुधार आउनुको साथै बौद्धिक कार्यमा तीव्रताका साथ अघि बढ्ने अवसर मिल्नेछ । सन्तानहरूबाट उचित सहयोग मिल्नेछ । पति–पत्नीबीच बिग्रिएको सम्बन्ध राम्रो बन्नेछ ।
प्रेमको मार्गमा आएको अवरोध हटेर जानेछ । नोकरीमा आएको समस्यालाई सजिलै हटाउन सकिनेछ । राजनीतिमा आउने समस्यालाई कूटनैति सहयोगमा आफ्नो प्रयासले सुल्झाउन सकिनेछ । महत्वपूर्ण काम ज्येष्ठ ९ पछि र कार्तिक १२ भित्र मात्र गर्नु उपयुक्त रहनेछ । कार्तिक १३ पछिको समय निकै प्रतिकूल रहनेछ । वैशाख, भाद्र, पौष र फाल्गुन महिना अशुभ र आषाढ, कार्तिक, मार्ग र चैत्र शुभ अरू मध्यम रहनेछन् ।
वर्षारम्भमा शनि गुरु राहु केतुका साथै अधिकांश ग्रह अनुकूल भएकोले ज्ञान विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षा र त्यस्तै काममा चौतर्फी सफलता पाउने योग छ । तपाईको निश्चल कार्य र इमान्दारितामा राज्यले नतमस्तक हुनु पर्नेछ । निर्माण कार्यमा लाग्नेहरूले आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गरी कूशलता प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउनेछन् ।
बोलीको प्रभाव राम्रो रहनाले आकस्मिक धनलाभ हुनुको साथै नसोचेको काम हात पार्न बोलीकै प्रभाव प्रयाप्त हुनेछ । ठूला व्यक्तिसँग हुने अन्तर संवादमा उनीहरूको मन जित्न सफल भई आफ्नो मनोबल बढ्नुको साथै उनीहरुकै सदासयताबाट पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको सम्भावना रहनेछ । नोकरीमा शुभ अवसरहरू प्रशस्त मात्रामा प्राप्त हुनेछन् । पदोन्नतिको सम्भावना पनि प्रवल छ । राजनीतिमा गुमेको स्थान फर्काउन सफल भइनेछ । कुटनैतिक कार्यमा ऐतिहासिक सफलता मिल्नेछ । शत्रु पराजय हुनुको साथै मित्र तथा पारिवारिक सहयोग प्रशस्त मात्रामा मिल्नेछ । नयाँ मित्रको आगमनले सफलतालाई अझै उचाइमा लैजानेछ । घर जग्गा तथा सवारी साधन जोड्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने ठूलै प्रयासले मात्र सफलता मिल्नेछ । व्यापारमा लाभ मिल्नुको साथै रमाइलो यात्रा हुने र यात्रामा हुने भेटघाटले वैदेशिक कार्यमा लाभ हुने योग छ । प्रेमको प्रस्ताव अरुबाटै आउनेछ ।
अविवाहित र सन्तान नहुनेहरूको लागि यो वर्ष निकै फलदायी रहनेछ । भाग्य बलियो हुनुको साथै धार्मिक कार्यहरूमा मन जाने र सामाजिक कार्यमा सम्मान पाउने बलियो सम्भावना छ । तीर्थयात्रा पनि हुनेछ । कुरा काटनेहरू सबै प्रशंसक हुनेछन् । पुराना समस्या सुल्झाउनका लागि यो उचित समय हो । ज्येष्ठ ९ पछि गुरुको केन्द्र प्रवेशले परिस्थिति अलि प्रतिकूल बन्नेछ । महत्वपूर्ण कामलाई त्यो भन्दा पहिला नै सक्नु उपयुक्त हुनेछ ।
ज्येष्ठ ९ पछि कार्तिक १२ सम्म वृहस्पति केन्द्रमा स्थान हानी गरेर रहने हुँदा नोकरीमा केही अप्ठ्यारहरू आउनेछन् । गोपनियतामा जोड दिनुहोला । राजनीतिमा शत्रुको कुदृष्टि पर्ने हुँदा अरूको विश्वासमा भन्दा आफ्नो विवेकमा काम गर्दा समस्या कम होला । यो समय अत्यन्त संयमित रहनु पर्नेछ । वैशाख, श्रावण, मार्ग र पौष शुभ महिना हुन भने ज्येष्ठ, आश्विन, माघ र चैत्र खराब र आषाढ, भाद्र, कार्तिक र फाल्गुन मध्यम महिना हुन् ।
वर्षारम्भमा दशम गुरु तथा शनि वक्रभै प्रतिकूल रहनेछ । राशि स्वामी र दशमेष गुरु स्थान हानी गर्दै दशमस्थानमा बसेको र चतुर्थ स्थानमा शनिको र गुरुको वक्र दृष्टि हुने र राहु समेत वक्र भई चतुर्थ रहने हुँदा स्वास्थमा समस्या धेरै आउन सक्छ । नोकरीमा सङ्कट आउनुको साथै राजनीतिमा समस्या आउनेछ । झुटा आरोप लगाउने हरू सक्रिय हुनेछन् । विश्वास गरेका हरूबाट धोका हुनेछ । विनाकारण हुने विवादले मानसिक तनाव बढ्नेछ ।
आर्थिक सङ्कटले सताउनेछ । कामको बीचमा अवरोध खडा गर्नेहरू सक्रिय हुनेछन् । मित्रहरूको गुनासो बढ्नुको साथै पारिवारिक समस्याले सताउने देखिन्छ । आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने हुनाले त्यतातिर समयमै ध्यान पुर्‍याउनु उचित होला । पढाइमा ह्रास आउनुको साथै बौद्धिक कार्यमा समस्या आउने योग छ । पितासँगको सम्बन्धमा ह्रास आउनेछ । सर्वत्र सङ्कट आउनेछ ।
गलत विचार बढ्नेछ । समयमा निर्णय नहुँदा आफ्नो काममा अरुले अधिकार जमाउनेछन् । ज्येष्ठ ९ पछि कार्तिक १२ सम्म गुरुको शनिको अनुकुलताले समय बलियो हुनेछ । उच्च मनोवल बढ्नुको साथै सकृय भएमा रोकिएका कामहरू बन्नेछन् । दशमेष गुरु भाग्य भावमा र एकादशेस शनि कर्म भावमा बलियो भएकोले अघि बढ्न सजिलो हुनेछ । धार्मिक कार्यमा अघि बढेर सम्मान पाउनु होला । सामाजिक कार्यमा प्रतिष्ठा बढ्नेछ । नोकरीमा आउने समस्या हटेर जानेछ । राजनीतिमा आएका समस्याहरू पूर्ण रुपले हटेर जानेछन ।
राज्यले आफ्नो गल्ती महसुस गरी तपाईको लगनशीलता र इमान्दारिताको उच्च मुल्याङ्कन गर्नेछ । पदक प्राप्ति पनि हुनेछ । आम्दानीमा आएका बाधाहरू पूर्ण रुपले हटेर जानेछन र आम्दानीका स्रोत हरू चौतर्फी जुटनेछन । व्यापारमा र वैदेशिक कार्यमा सोचे जस्तै सफलता मिल्नेछ । पढाइमा सुधार आउनुको साथै बौद्धिक कार्य पनि निर्विवाद अघि बढ्नेछ । परिवार तथा मित्रहरूले पनि कुरा बुझेर सहयोगको हात अघि सार्नेछन् । शत्रुलाई परास्त गर्दै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सहज वातावरण बन्नेछ । महत्वपूर्ण कामहरू ज्येष्ठ ९ देखि कार्तिक १२ भित्र गर्नु यव उपयुक्त रहला । ज्येष्ठ, भाद्र, पौष र माघ शुभ महिना हुन भने वैशाख, आषाढ, कार्तिक र फाल्गुन अशुभ छन् । श्रावण, आश्विन, मार्ग र चैत्र मध्यम रहनेछन् ।
बैशाख १ गते, २०७६ - १४:४८ मा प्रकाशित